Chindwin Journal - 2010 ELECTION 2
By:Yun WadiSee More3 hours ago · Comment · LikeUnlike · Share Remove PostMyape Rit ရွှေးကေါက်ပွဲ ၀င်ကြရန် မဲဆွယ်နေကြသော ပါတီများ နဲ့ အမတ်လောင်းမျာခင်များ- ပြည်သူတွေရဲ့ အကျိုးစီးပွာ အတွက် လုပ်ထာပါ ဆိုရင်-ရွှေကေါက်ပွဲက နှုပ်တွက် ကြောင်း ကြေငြာ ကြ ဖို့ မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်။ အမျိုးသား အကျိုးစီးပွား အတွက် ဆိုရင် ပေါ့ဗျာ- ဆက်လျှောက်မယ် ဆိုရင်တော့ ခင်များ တို့ မြောင်းထဲ ရောက် မှာ ဧကန် မလွှဲပါဘူး- Wednesday, November 3, 2010 နေပြည်တော် အထူးသတင်း ဒီကနေ့ကစပြီး ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေ နေပြည်တော်ကနေ ခရီးထွက်ခွာခြင်းမပြုကြဖို့ စစ်ချုပ်ရုံးက အမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်တယ်လို့ နေပြည်တော် သတင်းရပ်ကွက်က ဧရာဝတီကို ပြောပါတယ်။ဒုဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမောင်အေးရဲ့ နေအိမ်အနီး တနင်္လာနေ့ညက အသေးစားဗုံးပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာဟာ ကောလဟလ ထုတ်လွှင့်မှုသာဖြစ်တယ်လို့လည်း နေပြည်တော်သတင်းရပ်ကွက်က ဆိုပါတယ်။အခုလို ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကို နေပြည်တော်မှ မခွာခိုင်းတော့တာဟာ တပ်တွင်း အကွဲအပြဲကြောင့် မဖြစ်နိုင်ဘဲ ကျင်းပတော့မယ့် ရွေးကောက်ပွဲနဲ့သာ ပတ်သက်နိုင်ကြောင်း ပြည်ပရောက် တပ်မတော်ထောက်လှမ်းရေးဟောင်းတဦးက သုံးသပ်ပါတယ်။"ရွေးကောက်ပွဲအတွင်း ကြုံတွေ့ရနိုင်တဲ့ ပြဿနာတွေကို စုပေါင်းဆွေးနွေးဖြေရှင်းဖို့နဲ့ ရွေးကောက်ပွဲလွန်ကာလမှာ ဘယ်သူက ဘယ်တာဝန်တွေ ယူကြမယ်ဆိုတာကို ညှိနိုင်းဖို့ အစည်းဝေးတွေထိုင်ကြဖို့အတွက် ခရီးမထွက်ခိုင်းတာပဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တပ်တွင်း တင်းမာမှုတွေကြောင့်ဆိုတာ လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဗိုလ်သန်းရွှေဟာ သူ့အောက်ကလူတွေကို စည်းရုံးထားနိုင်ပါတယ်။ ပြည်သူတွေအပေါ်မှာသာ ဒီမိုကရေစီစနစ်မကျင့်သုံးပေမယ့် သူတို့အထဲမှာတော့ ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ ဆွေးနွေး ဆုံးဖြတ်တာများပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွှန့်ကို ဖြုတ်ချတုန်းကလည်း တိုင်းမှူးတွေကိုပါ ခေါ်ယူညှိနှိုင်းပြီး ဖြုတ်ထုတ် အကျယ်ချုပ်ချခဲ့တာ"လို့ ထောက်လှမ်းရေးဟောင်းက ဆိုပါတယ်။နေပြည်တော်မှာတော့ ယမန်နေ့ညပိုင်းကတည်းက ဈေးဆိုင်တွေကို ပိတ်ခိုင်းထားခဲ့ပြီး လမ်းတွေပေါ်မှာ လူသူသွားလာမှုလည်း လျော့နည်းသွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။အမှားပြင်ဆင်ချက်။ ။ဤသတင်း၏ တတိယအပိုဒ်တွင် မူလက အခုလို ဒုဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးတွေဟု မှားယွင်းဖော်ပြခဲ့သည်ကို အခုလိုဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေဟု ပြင်ဆင်လိုက်ရပါသည်။ တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ခယက ဥက္ကဋ္ဌများ ပြောင်းရွှေ့၊ ရွေးကောက်ပွဲ အပြီး အစိုးရသစ်၌ ပါမည် Wednesday, 03 November 2010 14:45	သျှမ်းသံတော်ဆင့်	ရွေးကောက်ပွဲအပြီး ပေါ်ပေါက်လာမည့် အစိုးရသစ်၌ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် နိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ ခရိုင်အေးချမ်း သာယာရေး နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ (ခယက) ဥက္ကဋ္ဌများအား လက်ရှိရာထူးမှ ပြောင်းရွှေ့မိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်ကြောင်း စုံစမ်း သိရသည်။နိုဝင်ဘာ ၁ ရက်က ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်စာတွင် နိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ ခရိုင် ၆၈ ခုမှ ခယကဥက္ကဋ္ဌ ၆၈ ဦး အနက် ၅၀ ၀န်းကျင် ခန့် ပြောင်းရွေ့ရမည်ဖြစ်ကြောင်း နေပြည်တော်စစ်ဘက် သတင်းရပ်ကွက်က သျှမ်းသံတော်ဆင့်သို့ ပြောသည်။ယခုပြောင်းရွှေ့မည့် ခယကဥက္ကဋ္ဌများသည် အစိုးရသစ် ၀န်ကြီးချုပ်ရုံးအဖွဲ့တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် နေပြည်တော်သို့ ထွက်ခွာ ရမည်ဖြစ်ပြီး လစ်လပ်သွားသည့် နေရာများ၌ စစ်တပ်မှ ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်ရှိသူများ အစားထိုးဝင် ရောက် မည် ဖြစ်သည်။“တနင်္လာနေ့က အမိန့်ထုတ်တာပေါ့ ပြောင်းတာကတော့ရွေးကောက်ပွဲပြီးမှ ပြောင်းကြမယ်၊ အစားဝင်မဲ့ သူတွေတော့ ရောက် နေပြီ ရာထူးတက်တာလည်း မဟုတ်ဘူး ကျတာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ နောက်တက်လာမဲ့ ၀န်ကြီးချုပ်ရုံးအဖွဲ့မှာ တာဝန်ထမ်း ရမှာ” ဟု သူကပြောသည်။ယခုပြောင်းရွေ့ရမည့် အထဲတွင် သျှမ်းပြည်(မြောက်ပိုင်း) မူစယ်ခရိုင် ခယက ဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းမင်းဇော် ပါဝင်ပြီး ၄င်း၏နေရာ တွင် အစားထိုးရန် ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး မိုးဟိန်း ရောက်ရှိနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း မူစယ်အာဏာပိုင် သတင်းရပ်ကွက်က အတည် ပြု ပြောသည်။၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအရ ရွေးကောက်ပွဲအပြီး ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်အစည်းအဝေး စတင်ခေါ်ယူကျင်းပသည့် ရက်၌အာဏာ တည်မည်ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားသော်လည်း ယခုရွေးကောက်ပွဲရလဒ် မထွက်ပေါ်မီ လာမည့် အစိုးရ ယန္တရားအတွက် နအဖက ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း လေ့လာသူများက သုံးသပ်သည်။ ---------- Forwarded message ----------Subject: Fwd: Forward : မြန်မာနိုင်ငံသား စီစစ်ရေးကဒ်ပြားတစ်ခု ကောက်ရထားပါတယ်၊To: Fw: Fwd: Forward : မြန်မာနိုင်ငံသား စီစစ်ရေးကဒ်ပြားတစ်ခု ကောက်ရထားပါတယ်၊ မင်္ဂလာပါ၂၅ ရက် အောက်တိုဘာ ၂၀၁၀ ရက်နေ့က ICA ရုံးအရှေ့၊ ကားမှတ်တိုင်မှာမြန်မာနိုင်ငံသား စီစစ်ရေးကဒ်ပြားတစ်ခု ကောက်ရထားပါတယ်၊အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကို အောက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်၊ မူလ ပိုင်ရှင်ကို ပြန်ပေးနိုင်စေဖို့ ထပ်ဆင့်Forward လုပ်ပေးကြပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။Myanmar NRIC Card Detail------------------------------------------------------NAME : U MYO THINTFATHER NAME : U CHIT TIN JOB : EDITORNRIC NO. : 044165STAY IN : YANGONတကယ်လို့ ပိုင်ရှင်တွေ့ခဲ့ရင် (92396150) ဒီဖုံးနံပါတ်ကို ဆက်သွယ်ပြီး၊ဒါမှမဟုတ် SMS ပို့ပြီး အကြောင်းကြားပေးပါ ... ။ Mark as SpamReport as AbuseMyape RitIn this note:Honeyy Lwinnမြန်မာ့ အင်တာ ပျက်- Roundup: Myanmar Internet link continues to meet with interruption<!--TMC_CONTENT_BODY_U2_BEGIN--> YANGON, Nov 03, 2010 (Xinhua via COMTEX) -- Myanmar's Internet link continued to meet with interruption for more than 10 days since late October running ataslow speed or intermittently or even...7 minutes ago · View note အသက်ရှည်ချင်ရင် လမ်းများများလျှောက်by Myanmar Weight Loss on Wednesday, November 3, 2010 at 3:21amပစ္စိအိုတာ-ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးဟာ တနေ့ကို လေးဆယ့်ငါးမိနစ်လောက် လမ်းလျှောက်ခဲ့တာကြောင့် ကိုယ်အလေးချိန် ၆၅-ကီလိုအထိ လျော့ကျသွားပါတယ်။ ယူတန်ဘတ်-ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးကျတော့ တနေ့ကို တနာရီလောက် လမ်းမှန်မှန်လျှောက်ခဲ့တာ ၁၈-လ အတောအတွင်း ကိုယ်အလေးချိန် ၁၅-ကီလို လျောကျသွားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပစ္စိအိုတာ နဲ့ ယူတန်ဘတ်တို့ကတော့ တနေ့ ၄၅-မိနစ်လောက် လမ်းလျှောက်ဖို့ကိုပဲ တိုက်တွန်းကြပါတယ်။ လမ်းလျှောက်တာဟာ အတော့ကိုလွယ်ကူပြီးတော့ တော်တော့်ကို အကျိုးများလှပါတယ်။ လမ်းလျှောက်ရင် ရလာမယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေကို အောက်မှာဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ( လမ်းလျှောက်တာ ဘာလို့ အကောင်းဆုံး လေ့ကျင့်ခန်းလို့ ပြောရတာလဲ )လမ်းလျှောက်တာဟာ ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ကျသွားဖို့အတွက် အတော့်ကို ထိရောက်မှု ရှိပါတယ်လို့ ကျွမ်းကျင်သူတွေက ပြောကြပါတယ်။ ကော်လိုရာဒို ကျန်းမာရေးသိပ္ပံမှာရှိတဲ့ အစာအာဟာရဆိုင်ရာဌာနရဲ့ ဒါရိုက်တာတယောက်ဖြစ်တဲ့ ဂျိမ်း(စ်)ဟေး(လ်)ဟာ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး စူးစမ်းလေ့လာမှုတွေ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဟေး(လ်)က တနှစ်အတွင်း ကိုယ်အလေးချိန် (၁၃)ကီလိုလောက် လျော့ကျသွားတဲ့ လူ(၂၀၀၀)ကို လေ့လာခဲ့ရာမှာ အဲဒီလူ (၂၀၀၀)ထဲက (၅၀)ယောက်မှာ (၄၉)ယောက်ဟာ ပုံမှန်လမ်းလျှောက်ကြတဲ့သူတွေပဲ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒီလူတွေဟာ တခြားလေ့ကျင့်ခန်းတွေကို မလုပ်ကြပေမဲ့လည်း လမ်းလျှောက်တာကိုတော့ မပျက်မကွက် ပုံမှန်လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဟေး(လ်)က လမ်းလျှောက်တာဟာ ခန္ဓာကိုယ် ပိန်သွယ်လျစေပြီး အဆီကျသွားအောင်လုပ်ဖို့ အဓိကလေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ( ဘာပြုလို့ ၄၅-မိနစ် လမ်းလျှောက်ရတာလဲ )တနေ့ကို အချိန်ဘယ်လောက်ကြာအောင် လမ်းလျှောက်ရင် လုံလောက်မယ်ဆိုတာကို ဘယ်သူတွေကမှ အတိအကျ မဖော်ထုတ်နိုင်သေးပါဘူး။ ဟေး(လ်)ကလည်း တနေ့ကို အချိန်ဘယ်လောက်ကြာအောင် လမ်းလျှောက်ဖို့ဆိုတာကို သူမသိသေးတဲ့အကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ဟေး(လ်) အပါအ၀င် သုတေသီပညာရှင်တွေရဲ့ ယေဘုယျ အကြံပေးတာကတော့---တနေ့ကို (၄၅)မိနစ် လမ်းလျှောက်ကြဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ဟေး(လ်) လေ့လာနေတဲ့ လူ(၂၀၀၀)ဟာလည်း တနေ့ကို ၄၅-မိနစ် လမ်းလျှောက်ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တနေ့ ၄၅-မိနစ်၊ တကြိမ်ကို ၁၅-မိနစ်စီ သုံးကြိမ်ခွဲပြီး လမ်းလျှောက်ပေးရင်လည်း ကီလိုဂျိုးတွေကို တိုက်ဖျက်ပစ်နိုင်ပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ( နေ့တိုင်း ဘာပြုလို့ လမ်းလျှောက်ဖို့ လိုအပ်သလဲ ) တပတ်ကို အနည်းဆုံး ၅-ရက် လမ်းလျှောက်တာကြောင့်လည်း ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ကျသွားနိုင်ပါတယ်။ တခြားလေ့ကျင့်ခန်းတွေ မလုပ်ရင်တော့ တနေ့ကို ၁-နာရီလောက် လမ်းလျှောက်ပါ။ အားလပ်တဲ့ စနေ၊ တနင်္ဂနွေလိုနေ့တွေမှာ တောင်တက်ရင်လည်း ကိုယ်အလေးချိန် လျော့စေပါတယ်။ တပတ်ကို နာရီဘယ်လောက်ထိ လမ်းလျှောက်ရမလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းက သင့်အပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါတယ်။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ နာရီကို နှစ်ရက်နဲ့ ပြည့်သွားအောင် အလွန်အကျွံ လမ်းလျှောက်တာမျိုးကိုတော့ ရှောင်ကြဉ်ပါ။ နေ့တိုင်း လမ်းလျှောက်တာဟာ အတော်လွယ်ကူတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်လို့ ပျက်ကွက်သွားမှာကို စိုးရိမ်စရာမလိုပါဘူး။ ပစ္စိအိုတာ-က ကျွန်မအိပ်ရာက နိုးရင် အမြဲသွားတိုက်တတ်ပါတယ်၊ အဲဒီလိုပဲ လမ်းလျှောက်တာဟာလည်း အမြဲမပျက် လုပ်နေတဲ့ အဓိကအလုပ်တခုပါပဲ-လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ( အစားအသောက် ဘယ်လိုစားရမှာလဲ )နေ့တိုင်း လမ်းလျှောက်နေပေမဲ့ အစားအစာကိုတော့ အကန့်အသတ်မရှိ စိတ်ကြိုက်စားတာမျိုးကိုတော့ ရှေင်ကြဉ်ရပါလိမ့်မယ်။ တာ(ဖ်)တက္ကသိုလ်က နှလုံးရောဂါ ပါရဂူ ရစ်ပီကော့(စ်)-က အစားအသောက် မဆင်ခြင်ရင်တော့ ကိုယ်အလေးချိန် မလျော့နိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အစာကြေလွယ်တဲ့ အစာတွေကို သင့်တင့်တဲ့ ပမာဏ စားသုံးရပါမယ်။ ရေတော့ များများကြီး သောက်ပါ။ အဲဒီလို အစာကိုကန့်သတ် စားသောက်ရင်တော့ အဆီကျပြီး ပိန်သွယ်လျလာပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုဖြစ်လာဖို့ လမ်းလျှောက်တာဟာ လုံလောက်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းပါပဲ-လို့ ဆိုပါတယ်။ ( အဆီကျတဲ့နှုန်း ဘယ်လောက်ထိ ရှိနိုင်သလဲ )လူတယောက်စီရဲ့ အဆီကျနှုန်းဟာ အသက်အရွယ် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း ဓာတ်ပြောင်းလဲမှုနဲ့ မူလခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန်တွေပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ ရူတန်ဘတ်က ကိုယ်အလေးချိန် ၃-ကီလိုလျော့ကျဖို့ လအတော်ကြာ လမ်းလျှောက်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အစားအသောက်၊ အနေအထိုင် ဆင်ခြင်မှု နေသားတကျ ဖြစ်သွားချိန်မှာ ကိုယ်အလေးချိန် ၉-ကီလို လျော့ကျဖို့ ၆-လပဲကြာခဲ့ပါတယ်။ ပစ္စိအိုတာ-ကတော့ တလအတောအတွင်း ၁-ကီလို လျော့ကျခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်မှာ အဆီပို မရှိသူတွေက ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ကျမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ တချို့ အခြေအနေတွေမှာ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာဟာ ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ကျဖို့ အမြန်ဆုံးနည်း မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဟူစတန်မှာ ရှိတဲ့ ဘေလာဆေးကောလိပ်ရဲ့ လေ့လာချက်တွေအရ အစားအသောက်ရှောင်တဲ့ လူတွေဟာ ပထမတနှစ်မှာ ကိုယ်အလေးချိန် ၇-ကီလို လျော့ပြီး။ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်သူတွေက ၃-ကီလိုပဲလျော့ကျပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒုတိယနှစ်မှာ အစားအသောက် ရှောင်တဲ့လူတွေဟာ အလေးချိန် ပြန်တက်လာကြပါလိမ့်မယ်။ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်သူတွေကတော့ ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ကျတာကို ဆက်ပြီးထိန်းထားနိုင်ကြမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်မှာ အဆီတွေကျပြီး ပိန်လျသွားမှု ရှိ-မရှိကို ကိုယ်အလေးချိန်နဲ့ တိုင်းတာဟာ မှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဘာပြုလို့လဲဆိုတော့ တချို့လူတွေဟာ အဆီကျသွးပေမဲ့လည်း ကြွက်သားတွေ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တာကြောင့်ပါပဲ။ အဲဒီအခါမှာ အဆီကျသွားပေမဲ့လည်း ကိုယ်အလေးချိန်ဟာ လျော့ကျသွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ ကိုယ့် ကိုယ်ခန္ဓာဟာ အဆီလျော့ကျပိန်လျသွားမှု ရှိ-မရှိ သိနိုင်ဖို့အတွက် ဘောင်းဘီရှည်တထည်ကိုဝတ်ပြီး အကျဉ်းအကျပ် ဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာကို တိုင်းတာတာဟာ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ( လမ်းလျှောက်ရင် ဘယ်လောက်ခွန်အားစို့ရသလဲ )ကိုယ်သွားလည်ချင်တဲ့ နေရာတခုကို သွားသလိုမျိုးပဲ ပုံမှန်နှုန်းနဲ့ လျှောက်ရမယ်။ အေးအေးဆေးဆေးပဲ တလှမ်းချင်း လျှောက်သွားရတာမျိုး မဟုတ်သလို အစွမ်းကုန် အားအင်စိုက်ပြီး မောကြီးပန်းကြီး လျှောက်ဖို့လည်း မလိုပါဘူး။ တနာရီကို ၆-ကီလိုမီတာနှုန်းနဲ့ လျှောက်ရင် လုံလောက်ပါတယ်။ ( လမ်းလျှောက်ဖို့ စိတ်ဝင်စားလာအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ )တောင်တက်တောင်ဆင်းတွေ၊ မရောက်ဖူးတဲ့နေရာအသစ်မှာ လမ်းလျှောက်တာဟာ လမ်းလျှောက်တာကို ငြီးငွေ့နေတာကို ပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ အုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့ လျှောက်တာဟာလည်း စိတ်ပျော်ရွှင်မှုကို ရရှိစေနိုင်ပါတယ်။ လမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့ လူမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကိုလည်း ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ရှင့် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ရှင့်အိမ်ထောင်ဖက်နဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အုပ်စုလိုက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် လမ်းလျှောက်ပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ လေးနှစ်လောက်က ဒစ်ထရပ်မန်နဲ့ သူ့ဇနီး ဂျိုတုိ့ဟာ တာဝေးလမ်းလျှောက်အဖွဲ့ထဲမှာ ပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးစလုံးဟာ အသက် ၆၀-ကျော်နေကြတဲ့သူတွေပါ။ ဒါပေမဲ့လည်း အပတ်စဉ်လုပ်နေတဲ့ ၁၀-ကီလိုမီတာ လမ်းလျှောက်ပြိုင်ပွဲကို အမြဲဝင်နွှဲနေကြတုန်းပါပဲ။ သူတို့က-တာဝေး လမ်းလျှောက်ရတာဟာ နယ်မြေဒေသမျိုးစုံကို ရောက်နိုင်ပြီး လူမျိုးစုံနှင့်လည်း ထိတွေ့ဆက်ဆံခွင့်ရပါတယ်-လို့ ဆိုပါတယ်။ ( ဘာပြုလို့ လမ်းလျှောက်တာကို မစွန့်လွှတ်နိုင်ရတာလဲ )တနေ့ကို ၄၅-မိနစ်လောက် လမ်းလျှောက်တဲ့သူတွေဟာ အစပိုင်းမှာတော့ ပိန်ချင်ကြလို့ လျှောက်ခဲ့ကြတာပါ။ ဒါပေမဲ့ နောက်ပိုင်းမှာတော့ စိတ်ချမ်းသာမှုအတွက် လမ်းလျှောက်ကြပါတယ်။ နှလုံးရောဂါ ပါရဂူ ရစ်ပီကတော့ လမ်းလျှောက်တာဟာ စိတ်ပိုင်းဆိုရာမှာလည်း အကျိုးရှိလှပါတယ်-လို့ လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့တာကို ပြောခဲ့ပါတယ်။ လေ့လာမှုတွေအရ တနေ့ကို ၄၅-မိနစ်လောက် လမ်းလျှောက်တာဟာ စိုးရိမ်ပူပန်မှုနဲ့ စိတ်တင်းကြပ်တာတွေကို လျော့နည်းသွားစေတယ်လို့ တွေ့ရပါတယ်။ လမ်းလျှောက်တာဟာ စနစ်ကျတဲ့ ကျန်းမာရေးကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။နေ့တိုင်း လမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့ ကျန်းမာရေးကို တဆင့်ပြီးတဆင့် ကောင်းမွန်မြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလိုပဲ စိတ်စွမ်းရည်ကိုလည်း မြှင့်တင်ပေးလာမှာ ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ရေးသားတင်ပြလိုက်ရပါတော့တယ်။ ( မြရီသွေး )( စရဏ မဂ္ဂဇင်း-၂၀၀၄-သြဂုတ် ) http://mawluu.blogspot.com/2009/08/blog-post_5560.html မှ ကုးယူစုဆောင်းသည်။ShareShwe Gon Dine and 13 others like this.Myanmar Weight Loss Tag တာကို မကြိုက်ရင် ပြောကြပါခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။MWLYesterday at 3:22amMoe Cho Thinn ဒီပို့စ်လေးအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဆရာဝန်က ကျန်းမာရေးအတွက် မလျှောက်မဖြစ် လျှောက်ရမယ်ဆိုလို့ အခုတော့ လမ်းစ လျှောက်နေပါပြီ။တနေ့ကို ၄၅ မိနစ် လျှောက်ရမယ် ဆိုတာကိုရော ၄-၅ မိနစ်လို့ ပြောင်းဖတ်သွားမိတယ်။ :)Yesterday at 3:45am · 1 personLoading...Peach Mon လမ်းလျှောက်တာကိုတော့ ကြိုက်တယ်။ တစ်ပတ်ကို ငါးရက် တနေ့ ၄၅မိနစ် လျှောက်တယ်။ ၀ိတ်တော့ သိပ်မကျပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သွားရလာရတာ သိပ်ပေါ့ပါးတယ်။ စိတ်ရှုပ်လာတဲ့အခါ ရေကန်ဘေး လမ်းလျှောက်တစ်နာရီလောက် ထွက်ပစ်လိုက်ရင်.. အတော်ကို သက်သာတယ်။21 hours ago · 1 personLoading...Ruth Less ယု..ကိုလဲ tag ပေးပါ...post အသစ်တင်တိုင်း tagပေးလို့ရရင် ပေးပါနော်..20 hours ago · 1 personLoading...Pyone Pyone Yi တို့ လည်း post လေးကိုကြိုက်တယ်....ကျန်းမာရေးအတွက်အကောင်းဆုံးပေ့ါ.........17 hours ago · 1 person Myat Myat Minn ဟေ့..ဒီမှာ တင်းနေတာနော်..ဘယ်သူ့ကိုဆဲရမယ်မှန်းမသိလို့..Tuesday at 1:57pm · LikeUnlikeTheingi Han အခု တရားခံတွေ့ပြီ..ဆဲတော့ ..ဟီးဟီးTuesday at 1:58pm · LikeUnlike မြန်မာပြည်က အင်တာပျက် အကြောင်း Myape Rit မြန်မာပြည်က Connection!!! ဧရာဝတီ ဘလော့ မှ ကူယူ ဖေါ် ပြ သည်- Tuesday, November 2, 2010 မြန်မာပြည်က Connection!!! ဟုတ်ကဲ့ အခုဆိုရင် Firefox က Google ကို စ ပေးတယ် ခင်ဗျ... Google က Face...Tuesday at 10:58pm · Comment · LikeUnlike · ShareThomas Mya Thwin and Bran Aung like this. 18:00ရန်ကုန် လုံခြုံရေး တိုးမြှင့်နေ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမယ့်ရက် နီးလာတာနဲ့အမျှ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ လူစည်ကားတဲ့ နေရာတွေမှာ ရဲနဲ့ စစ်သားအပါအဝင် လုံခြုံရေးတွေ တိုးချလာတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ဆိုပါတယ်။ 18:00အင်းစိန် “အင်းစိန် ၁ဝ မိုင်ကုန်းမှာ ရဲတွေက ဒိုင်းကာတွေ ကိုင်ထားတာ တွေ့တယ်။ အင်အားကတော့ ၃ဝ လောက် ရှိတယ်။ စစ်သားတွေတော့ မတွေ့ဘူး။ ရဲတွေပဲ လမ်းတွေမှာ လုံခြုံရေးချထားတာ။ လမ်းဆုံတွေမှာလည်း တွေ့တယ်။ ကျနော်တို့ ရပ်ကွက်မှာတော့ ရဲတွေက ဝင်စစ်တာမျိုးတော့ မရှိပါဘူး” 18:00ဗဟန်း “ဗဟန်းဘက်တွေမှာ ကျနော် တွေ့ခဲ့တယ်။ လမ်းထိပ်တွေမှာ ရဲနဲ့ စစ်သားတွေပါ။ အင်အားကတော့ ပြောဖို့ခက်တယ်။ သူတို့က အုပ်စုလိုက်ရှိတာပါ။ ၃ ယောက် တအုပ်စု၊ ၅ ယောက် တအုပ်စု၊ အဲလိုရှိတယ်။ လက်နက်တွေ၊ ဒိုင်းတွေ ပါတယ်။ စစ်ဝတ်စုံတွေနဲ့ပါ။ နောက် အင်းလျားကန်မှာလည်း ရှိတယ်။ ကားဂိတ်တွေမှာလည်း ရှိတယ်။ ခရီးသွားတွေကို စစ်ဆေးတာတွေ ရှိတယ်။ ညဆိုရင်လည်း စစ်တပ်ရယ်၊ ရဲရယ် ကင်းလှည့်တာတော့ ရှိတယ်” 18:00ပုဇွန်တောင် “ရဲကားပေါ်မှာ ရဲတွေ မပါဘဲနဲ့ ဒိုင်းကာတွေ ကပ်ထားတဲ့ ကားတစီးတော့ တွေ့တယ်။ အရပ်ဝတ်ထဲမှာ ကိုယ်နဲ့ သိတဲ့ လူတချို့ပါလို့ သိတာ” 18:00သင်္ဃန်းကျွန်းနဲ့ ဒဂုံမြို့သစ် “ကျိုက္ကဆံလမ်း (သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့) မှာ ရဲကားတွေနဲ့ စစ်သားတွေ အများကြီး တွေ့ခဲတယ်။ ၁ဝ စီးကျော်လောက် ရှိတယ်။ သံဆူးကြိုးတွေ၊ ရေသန့်ဗူးကြီးတွေနဲ့ အင်အား ၁ဝဝ ကျော်လောက် ရှိမယ်။ ကျနော်တို့ ဒဂုံမြို့သစ်မှာလည်း စွမ်းအားရှင်တွေ၊ ရဲတွေ၊ လုံခြုံရေးတွေ တော်တော်လေး ချထားတယ်” လူစည်ကားတဲ့ မင်္ဂလာဈေး၊ သမ္မတ ရုပ်ရှင်ရုံ၊ ဒဂုံစင်တာ၊ ယုဇန ပလာဇာ၊ မီးပွိုင့်တချို့နဲ့ ကန်တော်ကြီးလို နေရာတွေမှာပါ သာမန်ထက်ပိုတဲ့ လုံခြုံရေးတွေ တိုးချထားတယ်လို့ မဇ္ဈိမ ပြည်တွင်း သတင်းထောက်က ပြောပါတယ်။ 17:29ရွေးကောက်ပွဲ အဝင်မခံ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်များ မဟာမိတ်ဖွဲ့ မြန်မာစစ်တပ်ကို ပြန်တွန်းလှန်ရေးအတွက် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ကြီး ခြောက်ခုက စစ်ရေး မဟာမိတ်ဖွဲ့ဖို့ ထိုင်းနိုင်ငံ နယ်စပ်မြို့ မဲဟောင်ဆောင်မှာ မနေ့က ကျင်းပတဲ့ အစည်းအဝေးကနေ သဘောတူညီမှု ရသွားခဲ့ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲ မလုပ်တဲ့ ဒေသတွေကဖြစ်ပြီး အပစ်ရပ်ကော၊ မရပ်သူပါ ပါတဲ့ အဖွဲ့တွေဟာ မေလကတည်းက တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ပြီး မဟာမိတ်ဖွဲ့ဖို့ ကြိုးစားနေခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအဖွဲ့တွေကတော့ ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး KNU ၊ ကရင်နီ အမျိုးသား တိုးတက်ရေးပါတီ KNPP ၊ ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ၊ ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ KIO ၊ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ NMSP နှင့် ရှမ်းပြည်တပ်မတော် (မြောက်ပိုင်း) SSA-Nတို့ ဖြစ်ပါတယ်။ 17:10ကချင်ရပ်ကွက် မီးလောင် နေအိမ် ၃ လုံး မီးလောင်ပြီး လူ ၁၇ ယောက် အိုးအိမ်မဲ့ဖြစ်ရတဲ့ မီးလောင်မှုတရပ် ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့ မင်းရပ် ရပ်ကွက်မှာ မနေ့မနက်တုန်းက ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။“မီးလောင်တာက မီးအားလျှပ်စစ်မှ အပူချိန်လွန်ကဲလို့ ဖြစ်တာပါ။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာတော့ မရှိဘူး။ မီးဘေးဒုက္ခသည်က ၁၇ ဦး ရှိတယ်။ အိမ်ကတော့ ၃ လုံး ပါသွားပါတယ်။ ရပ်ကွက်က မီးရပ် ရပ်ကွက်မှာပါ။ မနက် ၃ နာရီမှာ ဖြစ်တာပါ’’ လို့ မြစ်ကြီးနားမြို့နယ် မီးသတ်ဌာန တာဝန်ကျ ဝန်ထမ်းက မဇ္ဈိမကို ပြောပါတယ်။“လူတွေ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာတော့ မရှိဘူး။ ဒီမနက် ကျနော် အဲဒီဘက်ကို ရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ လျှပ်စစ်မီးကနေ ဖြစ်တာလို့ ပြောကြတယ်။ ဖြစ်တဲ့နေရာကို သွားလို့မရဘူး။ အာဏာပိုင်တွေ လုံခြုံရေး ယူထားတယ်။ ရဲနဲ့ အရံမီးသတ်တွေက စောင့်ကြည့်နေတယ်’’ လို့ အနီးနားက ရပ်ကွက်တခုဖြစ်တဲ့ ရှမ်းစုတောင်ရပ်ကွက် ဒေသခံတယောက်က ဆိုပါတယ်။ 17:05ကြိုတင်မဲကို တစည တိုင်ကြား တနင်္သာရီတိုင်း မြိတ်မြို့ ငါးလေလံဈေးမှာ ပင်လယ်ပြင်ထွက်မယ့် ငါးဖမ်းလုပ်သားတွေဆီကနေ ကြိုတင်မဲ ကောက်ရာမှာ၊ ကြံခိုင်ရေးပါတီကိုပဲ မဲထည့်ဖို့ ဆောင်ရွက်မှုတွေ ရှိခဲ့တဲ့အတွက် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကို တိုင်ကြားထားကြောင်း တိုင်းရင်းသားစည်းလုံး ညီညွတ်ရေးပါတီက မဇ္ဈိမကို ပြောပါတယ်။ရေလုပ်သားတွေဆီက ကောက်ထားတဲ့ ကြိုတင်မဲတွေကို ပယ်ဖျက်ပေးဖို့ စာတင်ထားတဲ့အကြောင်း ရန်ကုန် တစည ရုံးချုပ် တာဝန်ရှိသူ တယောက်က မဇ္ဈိမကို ဒီကနေ့ အစောပိုင်းမှာ ပြောခဲ့တာပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့လ ၃၁ ရက်နဲ့ ဒီလ ၁ ရက်နေ့မှာ ကြိုတင်မဲပေးမှု ယာယီရပ်ဆိုင်းခဲ့ပေမယ့် ၂ ရက်နေ့မှာ ပြန်စခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။တခြားဒေသတွေမှာလည်း ကြိုတင်မဲကို ဥပဒေနဲ့မညီတဲ့ နည်းလမ်းတွေနဲ့ ကောက်ခံနေကြောင်း သတင်းတွေ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ 16:50ကယား မဲဆန္ဒနယ်တချို့ ဖျက်သိမ်း ကယားပြည်နယ်မှာ ရွေးကောက်ပွဲ မကျင်းပတော့ဘဲ ဖျက်သိမ်းမယ့် မဲဆန္ဒနယ်တချို့ရဲ့ စာရင်းကို ပြီးခဲ့တဲ့လ ၁၃ ရက်နေ့ကတည်းက ရရှိခဲ့တယ်လို့ လွိုင်ကော်မြို့နယ် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က မဇ္ဈိမကို ပြောပါတယ်။ လွိုင်ကော်၊ ဒီမောဆို၊ ရှားတော၊ ဖရူဆို၊ ဘောလခဲနဲ့ ဖားဆောင်းမြို့နယ်ထဲက မဲဆန္ဒနယ်တချို့ကို ဖျက်သိမ်းမှာလို့ အမည်မဖော်လိုတဲ့ မြို့နယ်ကော်မရှင် ဝန်ထမ်းတယောက်က ပြောဆိုပါတယ်။ လွိုင်ကော်မှာ ပြီးခဲ့တဲ့လ ၃၁ ရက်နေ့ကစပြီး ညမထွက်ရ နေဝင်မီးငြိမ်းအမိန့်ကို ထုတ်ပြန်လိုက်ထားတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ဆိုပါတယ်။ ၂၆ ရက်နေ့တုန်းကလည်း ကရင်နီတပ်နဲ့ စစ်အစိုးရတပ်အကြား တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ကယားပြည်နယ်မှာ အဓိက ယှဉ်ပြိုင်မယ့် ပါတီတွေက ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီနဲ့ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွှတ်ရေး ပါတီတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမောဆိုမြို့နယ်မှာတော့ ကယန်းအမျိုးသားပါတီလည်း ဝင်ပြိုင်မှာပါ။ ပြည်နယ်တခုလုံးမှာ မဲဆန္ဒနယ် ၁၄ ခု သတ်မှတ်ပေးထားတာပါ။ 16:24သံတွဲမှာ မဲစာရင်းတွေကွာ ရခိုင်ပြည်နယ် သံတွဲမြို့နယ် ကျေးရွာတွေမှာ မဲပေးခွင့်ရှိရက်သားနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် စာရင်းထဲမပါဘဲ ကျန်ရစ်တာတွေ ရှိတယ်လို့ ကမန်အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ ပြည်သူ့လွှတ်တော် အမတ်လောင်း ဦးတင်လှိုင်ဝင်းက ပြောပါတယ်။ မြို့နယ်နဲ့ ကျေးရွာကော်မရှင်တွေမှာပါတဲ့ စာရင်းဟာ ၃ ပုံ ၁ ပုံလောက်တောင် ကွာနေတာတွေ ရှိတယ်လို့ သူက ဆိုပါတယ်။ “ဥပမာဗျာ သံတွဲမြို့နယ် စေတီပြင်၊ ကျောင်းတိုက်ရွာတွေပေါ့ဗျာ။ လူ ၃ဝဝ မဲထည့်မယ်။ ... ကျေးရွာမှာ ကပ်တာက လူ ၂ဝဝ ပဲ ကပ်တယ်” လို့ ပြောပါတယ်။ ကော်မရှင်ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ မဲစာရင်းကို လူအများမြင်စေအောင် ထုတ်ပြန်ရမယ်လို့ ဆိုထားပေမယ့် တချို့ရွာတွေမှာ လိုက်နာမှု မရှိဘူးလို့ သိရပါတယ်။ မဲစာရင်းကွဲလွဲတာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကော်မရှင်ကို အကြောင်းကြားပေမယ့်လည်း အရေးယူ ဆောင်ရွက်ပေးတာမျိုး မရှိဘူးလို့ ဦးတင်လှိုင်ဝင်းက ပြောပါတယ်။ နာမည်ကျော် ငပလီကမ်းခြေရှိရာ သံတွဲမြို့မှာ မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ ၈ သောင်းကျော် ရှိနေပါတယ်။ 16:05မဲမပေးခွင့် ပညာပေးသူ ကင်မရာ သိမ်းခံရ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့ ၄ ရက်အလိုမှာ မဲမပေးလိုက မပေးဘဲ နေနိုင်တယ်လို့ ပညာပေးစာစောင်တွေ ဖြန့်ဝေနေတုန်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဝင် လူငယ်တယောက်ရဲ့ ကင်မရာကို ရဲက သိမ်းဆည်းမှု ဒီနေ့မနက် ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ တောင်ဒဂုံမြို့နယ်နေ ကိုအေးသွင်ကို မနက် ၁ဝ နာရီလောက်မှာ တောင်ဒဂုံရဲက ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး၊ ဒစ်ဂျစ်တယ် ကင်မရာနဲ့ မဲမပေးရေး လက်ကမ်းစာရွက်တွေကို သိမ်းပြီး ပြန်လွှတ်လိုက်ပါတယ်။ “လူစုခွဲပြီးတော့၊ ပြန်မယ်ဆိုပြီးတော့ ကားပေါ်တက်တာ ကားပေါ်မှာ ကျနော့်ဆီက ကင်မရာကို စွမ်းအားရှင်ကတဖက်၊ ကြံ့ခိုင်ရေးကတဖက် အတင်းဆွဲလိုက်တယ်” လို့ လက်ကမ်းကြော်ငြာဖြန့်ဝေရင်း မှတ်တမ်းတင် ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့တဲ့ ကိုအေးသွင်က ပြောပါတယ်။ 13:39ဝ' ကလည်း ကြံ့ဖွံ့နှင့် မပေါင်းဟုဆို ရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက် ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ဦးဆောင်သော အစိုးရပေါ်ပေါက်လာလျှင်လည်း မိမိတို့အနေဖြင့် အတိုက်အခံ ပါတီကြီးများနဲ့သာ ပူးပေါင်းပြီး ရပ်တည်သွားမည်ဟု ဝ' အမျိုးသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေး ပါတီက ပြောပါတယ်။ ”ကျနော်တို့ကတော့ နိုင်ခဲ့ရင်တော့ ကိုယ့်ဘာသာကို ရှိမှာပေါ့။ အခုတော့ ပေါင်းဖို့ မပေါင်းဖို့တော့ မခေါ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့ရပ်တည်ချက် အတိုင်းနေနေတာ။… ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ လားရှိုးတုန်းက ကြံ့ဖွံ့ခေါင်းဆောင်တွေ လာတုန်းက အတိုက်အခံပါတီလို ရပ်တည်သွား ဆိုရင်လည်း မမှားဘူးပေါ့။” ဟု ပါတီနာယက ဦးဖိလစ်ဆမ်က မဇ္ဈိမကို ပြောပါတယ်။ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီအနေနဲ့ ရွေးကောက်ပြီးနောက် အစိုးရတရပ်ကို ဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းမှာ ဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ အစိုးရအဖွဲ့အတွင်း တခြားပါတီတွေ ပါဝင်ကောင်း ပါဝင်နိုင်တယ်လို့ ပါတီကြီးအကဲ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန်က အရိပ်အမြွက် ပြောခဲ့တဲ့အပေါ် တုံ့ပြန်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မဇ္ဈိမသတင်းဌာန | အင်္ဂါနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ ၀၂ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် 18:54မုန်တိုင်းငယ်တခု ကျောက်ဖြူကို ဦးတည် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းကာ ပိုမိုအားကောင်းလာပြီးနောက် မုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်ဖြူမြို့ အနားတွင် လေဖိအားနည်း ရပ်ဝန်းက ပိုမိုအားကောင်းလာပီး မုန်တိုင်းငယ် ဖြစ်လာကာ ဆက်လက် အားကောင်းလျက်ရှိပီး ကျောက်ဖြူမြို့ကို ဦးတည်နေတယ်လို့ အင်္ဂါနေ့ည မြန်မာ့အသံမှ မိုးလေဝသတင်းကို ကြေညာသွားပါတယ်။ 19:16ကြံ့ဖွံ့နဲ့ မပေါင်းဘဲ အတိုက်အခံလုပ်မယ် ရွေးကောက်ပွဲအဖြေကနေ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ဦးဆောင်တဲ့ အစိုးရပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရင် မိမိတို့အနေနဲ့ အတိုက်အခံအဖြစ် ဆက်ရပ်တည်သွားမယ်လို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အင်အားစုပါတီက ပြောလိုက်ပါတယ်။ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီအနေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲအပြီးမှာ အစိုးရတရပ်ကို ဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းမှာ ဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ အစိုးရအဖွဲ့အတွင်း တခြားပါတီတွေ ပါဝင်ကောင်း ပါဝင်နိုင်တယ်လို့ ပါတီအကြီးအကဲ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန်က အရိပ်အမြွက် ပြောခဲ့တာကို NDF ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ ဦးသိန်းညွှန့်က အခုလို တုံ့ပြန်လိုက်တာပါ။ “ပြည်သူ့ အကျိုးစီးပွားကို ထိခိုက်မယ့်အရာကို လွှတ်တော်ထဲမှာ ဘယ်ပါတီ အစိုးရပဲ တင်လာတင်လာ ကန့်ကွက်မှာပါ။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ် ၆၆၄ ယောက်ပါ၊ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုဘက်က အမတ် ၁၃ဝ၊ ၁၄ဝ လောက် ရောက်လာရင် အဓိကထားရမယ့် အလုပ်က ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းနဲ့ မကိုက်ညီတဲ့ ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံ ဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းတဲ့ ပြင်ဆင်ချက်အတိုင်း ပြည်သူတွေကို၊ လွှတ်တော်ထဲမှာရှိတဲ့ တခြားပါတီ၊ တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်တွေကို ကျနော်တို့ တင်ပြနိုင်မှာပါ” လို့ ဦးသိန်းညွှန့်က ပြောပါတယ်။ 19:16မုန်တိုင်း ဖြစ်လာလေမလား ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းဟာ မုန်တိုင်းအဖြစ်နဲ့ ရောက်လာနိုင်လို့ လာမယ့် ၄၈ နာရီအတွင်း စောင့်ကြည့်ရမယ့် အနေအထား ဖြစ်တယ်လို့ ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ မိုးလေဝသပညာရှင် ဦးထွန်းလွင်က ပြောပါတယ်။ “မုန်တိုင်းက ထိုင်းတောင်ပိုင်း ပင်လယ်ကွေ့ကနေတော့ ထွက်လာပြီ။ ထွက်လာပြီးတော့ ထိုင်းနဲ့ မလေးရှား ကျွန်းဆွယ်ကို ဖြတ်နေပြီ။ ဒီနေ့ ညနေဆိုရင်တော့ တောင်ဘက် အန်ဒမန်ပင်လယ်ထဲ ရောက်မယ်။ ရောက်ရင်တော့ အားပျော့ မသွားဘဲ မုန်တိုင်းအဖြစ် ဆက်ရှိမယ်လို့ ယူဆရတာပေါ့နော်” ဟု သူက ပြောပါတယ်။ “နောက်ထပ် ၄၈ နာရီအတွင်း မြောက်ဘက်ကို တက်မတက်ကြည့်ရမယ်။ အခုချိန်ထိ (ညနေ ၅ နာရီခွဲ) တော့ အနောက်ဘက်ကို သွားမယ့်ပုံနဲ့ ပြနေတယ်။ တကယ်လို့ အနောက်ဘက်တည့်တည့် သွားမယ်ဆိုရင် မြန်မာပြည်က လွတ်နိုင်တယ်။ အဲဒီလိုမဟုတ်ဘဲ အနောက်မြောက်ဘက် နည်းနည်းပါမယ်ဆိုရင်တော့ ရက်လည်း ကြာမယ်။ စောင့်ကြည့်ရမယ့် အနေအထား ရှိနေတယ်။ ပြန်လည်း ကွေ့နိုင်တယ်” လို့ သူက ဆိုပါတယ်။ 18:54ဒေါ်စုလွတ်မြောက်ရေး ဆုတောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွတ်မြောက်ရေး ဆုတောင်းပွဲတရပ်ကို အင်္ဂါဝတ်ပြု ဆုတောင်းအဖွဲ့ဝင်တွေက ရန်ကုန်တိုင်း ရွှေပြည်သာမြို့နယ်မှာ ဒီကနေ့ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဖွဲ့ဝင် ဒေါ်ညိမ်းတင် နေအိမ်မှာ ဒီနေ့မနက် ပြုလုပ်ခဲ့ရာ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ ၁၅၀ လောက် တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ကဗျာရွတ်ဆိုပွဲလည်း ပါဝင်ပြီး မနက် ၁၀ နာရီလောက်မှာ အဆုံးသတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ 18:30လွိုင်ကော်မှာ ကာဖျူးထုတ် ညမထွက်ရ နေဝင်မီးငြိမ်းအမိန့်ကို စစ်အစိုးရက ကယားပြည်နယ် လွိုင်ကော်မြို့မှာ အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်နေ့ကစပြီး ထုတ်ပြန်လိုက်တယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။ ည ၆ နာရီကနေ မနက် ၆ နာရီအထိ အပြင်ထွက်ခွင့် မပြုဘဲ တားမြစ်ထားတာပါ။ အင်တာနက် ဆိုင်တွေကတော့ ည ၈ နာရီခွဲအထိ ဖွင့်ထားပါသေးတယ်။ ပုံမှန်ဆိုရင် ည ၁၁ နာရီလောက်အထိ ဖွင့်ကြပါတယ်။ ကရင်နီ လူမှုဖူလုံရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မတီ ဒါရိုက်တာ သီဘူးက ’’ကာဖျူးထုတ်တာ အကြောင်း နှစ်ကြောင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်တယ်။ တခုက ရွေးကောက်ပွဲ နီးလာလို့၊ နောက်တကြောင်းက အောက်တိုဘာ ၂၆ ရက် နေ့က ကရင်နီတပ်နဲ့ ဗမာတပ် တိုက်ပွဲဖြစ်တာကြောင့် ဖြစ်မယ်။ နောက်ပြီးတော့ ဒီကာဖျူး ဘယ်လောက်ကြာမယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှ မသိဘူး’’ လို့ ပြောပါတယ်။ - ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအား ဆန့်ကျင်သည့် ဆန္ဒပြပွဲ နှစ်ရက်ဆက်တိုက် ဖြစ်ပွား click- မွန်ပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲ ဆန္ဒပြမှု လူ (၅၀၀) ကျော်တက် click- နအဖတပ်စခန်းကို ဒုတိယအကြိမ် ကရင်နီတပ် ဝင်တိုက် click- ကယန်းပြည်သစ်၊ ကလလတ၊ ကရင်နီနှင့် စစ်တပ်တို့ အခွန် ၀ိုင်းကောက်၍ ပြည်သူများ မခံနိုင် click- ညမထွက်ရ မာရှယ်လောအမိန့် လွိုင်ကော်တွင် ချမှတ် click ၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲအား ဆန့်ကျင် သည့် ဆန္ဒပြပွဲ နှစ်ရက် ဆက်တိုက် ဖြစ်ပွား Submitted by Karen Information Center on Monday, 1 November 2010No Comment နိုဝင်ဘာ ၁ရက်။ စောသိန်းမြင့် (ကေအိုင်စီ) ကရင်ပြည်နယ်နှင့် မွန်ပြည်နယ် နယ်စပ်ဒေသများတွင် နအဖ စစ်အစိုးရ ဦးစီးကျင်းပမည့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို ဆန့်ကျင် သည့် လူထုဆန္ဒပြပွဲ နှစ်ရက် ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟု ဒေသခံများ၏ ပြောကြားချက်များအရ သိရသည်။ ယနေ့မနက်တွင် ကရင်ပြည်နယ် ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်ရှိ ကျေးရွာပေါင်း ၅ရွာမှ ဒေသခံ လူထု ၂၀၀ကျော်က မကြာခင် ကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲကို မလိုလားသည့် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ချက် ဆိုင်းပုဒ်များကို ကိုင်ဆောင်ကာ တစ်နာရီခန့် ငြိမ်းချမ်းစွာ စု ပေါင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်ဟု ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ခဲ့သူ စောတာပစဲက ယခုလို ပြောသည်။ သူက “ဒီနေ့မနက် ၉နာရီကနေ ၁၀နာရီအထိ ကျနော်တို့ ရွာငါးရွာက ရွာသူကြီး အပါအ၀င် ရွာသူရွာသား ၂၀၀ကျော် စုပေါင်း ပြီးတော့ ဆိုင်းပုဒ်တွေ ကိုင်ဆောင်ပြီး ငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့ပဲ ဆန္ဒပြပွဲတရပ်ပြုလုပ်တယ်။ ဆိုင်းပုဒ်တွေမှာတော့ တရားမျှတမှု မရှိတဲ့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ အလိုမရှိ၊ တိုင်းရင်းသား ပြည်သူလူထု အားလုံးမဲပေးနိုင်ရေး၊ စစ်မှန်သောပြည်ထောင်စု ဖြစ်ပေါ်လာရေး၊ စစ်မှန်သော ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်ပေါ်လာရေးဆိုပြီး ရေးထားတဲ့ ဆိုင်းပုဒ်တွေနဲ့ ဆန္ဒပြကြတာပါ။ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို လုံးဝ အလိုမရှိတဲ့အကြောင်း ထုတ်ဖော်ဆန္ဒပြတာပါ။”ဟု ကေအိုင်စီကို ပြောသည်။ ၎င်းဆန္ဒပြပွဲကို သူးလေကုန်းနှင့် တခါ့ချောင်းကျေးရွာစပ်ကြား နအဖ ခလရ(၂၈၄)တပ်စခန်းနှင့် (၂)မိုင်အကွာအဝေးတွင် ပြု လုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး သူးလေကုန်းကျေးရွာ အထက်နှင့် အောက်(တခါ့ခီး)၊ တခါ့ချောင်း(တခါ့ကလိုး)၊ မီးလောင်ချောင်း (ပိုပေါ်က လိုး)၊ တကေး(တကုခီး)နှင့် ကြာအင်းရွာကြီးတို့ ပါဝင်သည်ဟု စုံစမ်းသိရှိရသည်။ ယမန်နေ့မနက်ကလည်း မွန်ပြည်နယ် သံဖြူဇရပ်နှင့် ရေးမြို့နယ်ကြားတွင် ရွာပေါင်း ၁၀ရွာမှ ဒေသခံ လူထု ၅၀၀ကျော်က ဆိုင်းပုဒ်နှင့် ပိုစတာစာရွက်များ ကိုင်ဆောင်ပြီး နံနက် ၇နာရီခွဲမှ ၉နာရီခွဲအထိ အလားတူ စုပေါင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြကြောင်း ဆန္ဒပြပွဲ ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ဦးဆောင်ခဲ့သည့် အမည်မဖော်လိုသူ ဒေသခံတစ်ဦးက ယခုလို ပြောသည်။ “မနေ့က လုပ်တဲ့ ဆန္ဒပြပွဲမှာ လူထု ၅၀၀ကျော် ပူးပေါင်းပါဝင်တယ်။ ဆိုင်းပုဒ်မှာ ၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲကို တိုက်ဖျက်ရေးဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ကြီးကြီးနဲ့ စာတန်း ရေးထားတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ပိုစတာတွေမှာကျတော့ သုံးပွင့်ဆိုင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး၊ ညီ ညွှတ်သော ဒီမိုကရေစီ တည်ဆောက်ရေး၊ စစ်အာဏာရှင် တိုက်ဖျက်ရေးဆိုတဲ့ ပိုစတာတွေ ကိုင်ဆောင်ပြီးတော့ ငြိမ်းချမ်းစွာ လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်။”ဟု ပြောသည်။ နအဖ စစ်အစိုးရ ဦးစီးကျင်းပမည့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအား ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြသည့်ရွာသားများ အဆိုပါ ဆန္ဒပြပွဲနှစ်ခုစလုံးတွင် သက်ဆိုင်ရာ ဒေသအာဏာပိုင်များနှင့် အလှမ်းဝေးသောကြောင့် အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းမှုများ မခံ ရသော်လည်း ဆန္ဒပြမှုအပြီးတွင် နအဖ စစ်တပ်များ တက်ရောက်လာသည့် သတင်းကြောင့် ဆန္ဒပြသူတချို့ လွတ်မြောက်ရာ သို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရသည်ဟု ဆန္ဒပြသူများက ပြောသည်။ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်တွင် ယခင်လ ၂၂ရက်နေ့က ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နှင့် ကျေးရွာအချို့ရှိ အစိုးရဌာနဆိုင်ရာရုံးများ၊ ဆေး ရုံ၊ စာသင်ကျောင်းများရှေ့တွင် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို ဆန့်ကျင်သည့် စာရွက်စာတမ်း ဖြန့်ဝေသည့် လုပ်ဆောင်မှုများ ရှိခဲ့သလို ၂၀၀၈ခုနှစ် ပြည်သူ့ဆန္ဒခံယူပွဲတွင် အလားတူ ဆန္ဒပြပွဲပြုလုပ်ခဲ့ရာ အာဏာပိုင်စစ်တပ်များ၏ ၀င်ရောက်ဖြိုခွင်းမည့် သတင်းကြောင့် ဆန္ဒပြပွဲနေချိန်အတွင်းပင် လူစုခွဲခဲ့ရသည်။ သတင်း RSS Feed မွန်ပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲ ဆန္ဒပြမှု လူ ၅၀၀ ကျော်တက် By နိုင်ကွန်းအိန် တနင်္လာ, 01 နိုဝင်ဘာ 2010 ဓာတ်ပုံ Kao Wao News Group မွန်ပြည်နယ် ရေးမြို့နယ်အတွင်း ရွေးကောက်ပွဲ ဆန့်ကျင် ဆန္ဒပြပွဲ ပြုလုပ်နေစဉ်။ ထပ်ဆင့် ဖြန့်ဝေရန် DiggFacebookStumbleUponYahoo! Buzzdel.icio.us ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပဖို့ ၆ ရက်သာ လိုတော့တဲ့ အချိန်မှာ မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေကို အကြိတ်အနယ် လုပ်ဆောင်နေသလို ရွေးကောက်ပွဲ ဆန့်ကျင် ဆန္ဒပြမှုတွေကလည်း ပိုပြီး များလာနေပါတယ်။ မွန်ပြည်နယ်ဘက်မှာ ဆိုရင်လည်း ရွေးကောက်ပွဲ ဆန့်ကျင် ဆန္ဒပြပွဲကို မနေ့က ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အခုဆန္ဒပြပွဲမှာ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ ကျောင်းသား ကျောင်းသူတွေလည်း ပါဝင်လာတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။ ဒေသခံ တချို့ကျတော့ ၉၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲက အနိုင်ရပါတီကို ရွေးချယ် မဲပေးပြီးသားမို့ မဲပေးစရာ မလိုတော့ဘူးလို့ ပြောဆိုမှုတွေကလည်း ရှိနေပါတယ်။ အခုဆိုရင် အဲဒီ ဆန္ဒပြတဲ့ ဒေသမှာ နယ်မြေခံ စစ်တပ်တွေကနေ လုံခြုံရေး တိုးမြှင့်ချထားပြီး ကျေးရွာ ရယကတွေကို ဆင့်ခေါ်ထားတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို ဗွီအိုအေ ထိုင်းအခြေစိုက် သတင်းထောက် နိုင်ကွန်းအိန်က တင်ပြပေးထားပါတယ်။ မွန်ပြည်နယ် ရေးမြို့နယ် လမိုင်းမြို့နယ်ခွဲ ကလို့တုတ်ရွာမှာ ရွေးကောက်ပွဲ ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြပွဲကို အောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်နေ့ မနက်က ပြုလုပ်ခဲ့ရာမှာ ပညာရေးနဲ့ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းတွေ အပါအဝင် ကရင်ပြည်သူတွေ ရာနဲ့ချီပြီး တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ ဆန္ဒပြခေါင်းဆောင် စောသူရိန်က အခုလို ပြောပါတယ်။ “ကျနော်တို့ ဆန္ဒပြတဲ့နေရာက ရေးမြို့နယ် လမိုင်းမြို့နယ်ခွဲ ကားလမ်းမကြီးနဲ့ မနီးမဝေးတဲ့ နေရာမှာ ကျနော်တို့ လူ ၅၀ဝ ကျော် တက်ပါတယ်။ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို ဆန့်ကျင် တိုက်ဖျက်သွားဖို့ရယ်၊ စစ်အာဏာရှင် အစုထဲကပဲ တဖက်သတ် ရေးဆွဲထားတဲ့ ၂၀ဝ၈ နာဂစ်စစ်အာဏာရှင် ဥပဒေကို အသက်သွင်းသွားမှာ ဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့အတွက် ဒီရွေးကောက်ပွဲကို ကျနော်တို့အနေနဲ့ လုံးဝ လက်မခံဘူး။” အဲဒီဆန္ဒပြပွဲမှာ ကရင်ကျေးရွာသားတွေ အများစု ပါဝင်တက်ရောက်သလို အစိုးရ ပညာရေး ဝန်ထမ်းတွေလည်း တက်ရောက် ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ အမည်မဖော်လိုသူ ပညာရေးဝန်ထမ်း တဦးကတော့ အခုလို ပြောပါတယ်။ “ကျမတို့ ပညာရေးဝန်ထမ်းက အယောက် ၃၀ လာရောက် ဆန္ဒပြကြပါတယ်ရှင်။ ကျမတို့ ဝန်ထမ်းများ အနေနဲ့ လွတ်လပ်မှု၊ တရားမျှတမှု၊ ဒီမိုကရေစီအရေး၊ လူ့အခွင့်အရေး ဘာမှလုပ်မပေးနိုင်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို ကျမတို့ အယုံအကြည် မရှိတဲ့အတွက် လာရောက် ဆန္ဒပြကြတယ်။” အောက်တိုဘာလ ၂၅ ရက်နေ့က ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြပွဲမှာ ဝန်ထမ်းတွေ၊ ကျောင်းသားတွေ မပါခဲ့ပေမဲ့ အခုဆန္ဒပြပွဲမှာတော့ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ တွေလည်း ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီဆန္ဒပြပွဲမှာ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းသူတဦးကို ဆက်သွယ် မေးမြန်းခဲ့ရာမှာတော့ အခုလို ပြောပါတယ်။ “ကျမတို့ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ အနေနဲ့ ဒီရွေးကောက်ပွဲကို ဒီအနီးအနား ပြည်သူများနဲ့အတူ ပါဝင်ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ သမီးနာမည်က ဌေးဌေးမြင့်ပါရှင်။ ကျောင်းနေတုန်းပဲ၊ တက္ကသိုလ် နောက်ဆုံးနှစ်ပါရှင်။ သမီးတို့ ကျောင်းသူက အယောက် ၃၀ လာရောက် ဆန္ဒပြပါတယ်ရှင်။ အဲဒါကတော့ သမီးတို့ရဲ့ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ပြန်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ လာရောက် ဆန္ဒပြပါတယ်။ နအဖရဲ့ လက်အောက်မှာ အနိုင်ကျင့်ခံရလို့ သမီးတို့ မခံချင်တဲ့စိတ်နဲ့ လာပြီးတော့ ဆန္ဒပြရပါတယ်ရှင်။” ဖိုးသောကြာလို့ခေါ်တဲ့ ရွာသားတဦးကတော့ ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲဆန္ဒပေးမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ “ကျနော်တို့ဟာ ရွေးကောက်ပွဲ ပေးစရာမလိုဘူး၊ ရွေးထားပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ ၉၀ ခုနှစ်မှာ ကျနော်တို့ ဒီမိုကရေစီ ရရှိဖို့အတွက် အနိုင်ရပါတီကို ထောက်ခံမဲ ပေးပြီးသား ဖြစ်တဲ့အတွက် ဘာပွဲပဲ သူတို့လုပ်လုပ် ကျနော်တို့က ထောက်ခံမှာ မဟုတ်တဲ့အကြောင်း ပြောချင်တယ်။ ကျနော့်နာမည် ဖိုးသောကြာလို့ ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျား။” အခုဆိုရင် လမိုင်းမြို့နယ်က ကလို့တုတ်ကျေးရွာ ဝန်းကျင်မှာ နယ်မြေခံ စစ်တပ်တွေကနေ လုံခြုံရေး တိုးမြှင့်ချထားခဲ့ပြီး နိုဝင်ဘာ ၄ ရက်နေ့မှာ ရေးမြို့နယ် အေးချမ်းသာယာရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေး ကောင်စီကနေ ကျေးရွာလူကြီး အားလုံးကို ဆင့်ခေါ်ထားတယ်လို့ ကျေးရွာ ရယကအဖွဲ့ဝင် တဦးက ပြောပါတယ်။ ဆန္ဒပြ ခေါင်းဆောင်တွေ အနေနဲ့ စစ်အာဏာပိုင်တွေ လက်လှမ်းမမီတဲ့ နေရာတွေမှာပဲ ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြတာဟာ ဆန္ဒပြသူတွေရဲ့ လုံခြုံရေးအတွက်လို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဆန္ဒပြတဲ့ နေရာဒေသဟာ KNU ခေါ် ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံးက ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ နယ်မြေတွေ ဖြစ်တယ်လို့ ဆန္ဒပြပွဲကို တက်ရောက်ခဲ့သူ ဒေသခံတဦးက ပြောပါတယ်။ ဒီ ကလို့တုတ်ကျေးရွာ ဆန္ဒပြပွဲဟာ KNU ကနေ ဦးဆောင်ပြုလုပ်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူးလို့ တပ်မဟာ ၆ က စစ်ဘက်အရာရှိ တဦးက ပြောပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာ ၂၅ ရက်နေ့တုန်းကလည်း သံဖြူဇရပ်နဲ့ ရေးမြို့နယ်အကြား ကျောင်းရွာဘက်မှာ ပထမအကြိမ် ဆန္ဒပြပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ ဆန္ဒပြခေါင်းဆောင် စောသူရိန်က ပြောပါတယ်။ အခုဆိုရင် ရွေးကောက်ပွဲ နီးလာတာနဲ့အမျှ ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြမှုတွေ တိုးပြီး လှုပ်ရှားလာနေပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ တောင်ဘက်ခြမ်း ကော့သောင်းနဲ့ ဘိက်ဒေသတွေမှာ ရွေးကောက်ပွဲကို ဆန့်ကျင်တဲ့ တီရှပ်တွေဝတ်ပြီး ဆန္ဒပြနေသလို ရှမ်းပြည်နယ် ဆီဆိုင်၊ ဟိုပုံးဘက်မှာလည်း လူငယ်အဖွဲ့တွေ ဦးစီးပြီးတော့ မဲမပေးရင်လည်း ရတယ်ဆိုတဲ့ လက်ကမ်းစာစောင်တွေ ဖြန့်ဝေမှု လုပ်နေပါတယ်။ ရန်ကုန်တိုင်း သုံးခွမြို့နယ်နဲ့ ပဲခူးတိုင်း နတ္တလင်းမြို့နယ်ဘက်မှာလည်း ရွေးကောက်ပွဲ ဆန့်ကျင်တဲ့ လက်ကမ်းစာစောင် ဖြန့်ဝေမှုတွေ လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ ပြည်တွင်း နိုင်ငံရေးသမားတွေက ပြောပါတယ်။ အားလုံး မြန်မာ အမျိုးသမီး စစ်စစ် တွေပါ နော်-မြန်မာပြည်ဟာ-စစ်အစိုးရ လက်ထက်မှာနေရာတကါ နောက်ဆုံးက လိုက်နေတယ်ဆိုတာ မဖြစ် နိုင်ပါဘူးဗျာ- Last Updated ( Friday, 05 November 2010 )
Thu Zar Win s Face Book
Who's Online	We have 18 guests online	Oxford Advanced Learner's Dictionary at ... English - Myanmar online dictionary at MyOrdbok မြန်မာမီဒီယာများ ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်း ဌာနများ President-officeပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနThe Voice Weeklyရန်ကုန်တိုင်းမ်Eleven Media Groupပေါ်ပြူလာရွှေအမြုတေနေရဉ္ဖရာမဇ္ဈိမဒီမိုကရက်တစ် မြန်မာ့အသံHot Newsလွတ်လပ်တဲ့ အာရှအသံဗွီအိုအေ မြန်မာပိုင်းဘီဘီစီ မြန်မာပိုင်း မြန်မာမီဒီယာများ မြန်မာသတင်းရပ်ဝန်းဈေးကွက်ဂျာနယ်လောကအလှအွန်လိုင်းမဂ္ဂဇင်းသံလွင်အွန်လိုင်းမဂ္ဂဇင်းပေါ်ပြူလာဂျာနယ်Chic မဂ္ဂဇင်းယခုအပတ်စဉ်မဂ္ဂဇင်းအမှန်သတင်းများဂျာနယ်၇ရက်သတင်းဂျာနယ်အိုင်ဒီယာမဂ္ဂဇင်းပီးပဲလ်မဂ္ဂဇင်းအောင်မြင်မဂ္ဂဇင်းသရဖူမဂ္ဂဇင်းပေဖူးလွှာမဂ္ဂဇင်းရွှေအမြုတေမဂ္ဂဇင်းမန္တလေးအိုင်ကွန်မဂ္ဂဇင်းချင်းတွင်းမဂ္ဂဇင်းအထက်မြန်မာပြည်ဂျာနယ်များအလင်းတန်းဂျာနယ်လျပ်တပြက်ဂျာနယ်သတင်းဆယ့်တစ်ဂျာနယ်အပတ်စဉ်အသံဂျာနယ်အသံဂျာနယ်မြန်မာတိုင်းမ် သတင်းဌာနများ ဦးထွန်းလွင်(မိုးလေဝသ)TheNewLightofMyanmarကြေးမုံသတင်းစာမြန်မာ့အလင်းမြန်မာ့သတင်းအစုံအလင် Radio ဘီဘီစီဗွီအိုအေလွတ်လပ်သည့် အာရှအသံဒီမိုကရက်တစ် မြန်မာ့အသံမိုးမခCNNAl JazeeraBBCVOARFADVB ဆုံဆည်းရာနစ်နေမန်းမိုးသီးဇွန်ဒီမိုဝေယံဒေါင်းမာန်ဟုန်အညာနွေ တမာမြေမျိုးချစ်မြန်မာညိုကြီး ကိုထိုက် ဒီရေ ဧရာဝတီ ►ဘောလုံးပွဲအဖြေတိုက်ရိုက် ကြည့်ရှုရန် မင်းသား မင်းသမီး ဒါရိုက်တာ မော်ဒယ်လ်များကျော်သူစင်ရော်မောင်မောင်နေတိုးကျော်ကျော်ဗိုမင်းထက်ကျော်ဇင်ရဲတိုက်မိုးယံဇွန်ကောင်းခန့်နန္ဒလှိုင်စမိုင်းတင်မိုးလွင်တင့်တင့်ထွန်းထွန်းအိန္ဒြာဗိုသန္တာလှိုင်ဝတ်မှုန်ရွှေရည်ဖွေးဖွေးနန်းစုကေဆွမ်နန်းစုရတီစိုးနှင်းဝတ်ရည်သောင်းအေးဝတ်ရည်သောင်းသင်ဇာဝင့်ကျော်စန္ဒီမြင့်လွင်ဝိုင်းစုခိုင်သိမ်းခိုင်သင်းကြည်မော်ဖူးမောင်မြလေးထက်မိုးမြင့်ဇင်ဇင်အိမ့်ဖူးငယ်အေပရယ်လ်စောအေးမြတ်သီဟန်New JulietMagnolia CiSnow Silverသီရိရှင်းသန့်ခင်နန်းထိုက်ပိုးလေးချစ်လေးနဒီထွဋ်ုဆွေဆုကဗျာဝင်းထွဋ်ုတာယာပပ၀င်းဆုပန်ထွာမေသက်ခိုင်ပြည့်ဖူးခိုင်ချစ်သုဝေချောရတနာရဝေအောင်မယ်လိုဒီမင်းမော်ကွန်းမီချီကိုမိုးအောင်ရင်ယမင်းသီရိဇော်ချောချစ်ဆုပန်ထွာပုလဲဝင်းမီးမီးသုခမင်းသွေးဂီတရပ်ဝန်း မှ နာမည်ကျော်များဟန်ထွန်းစည်သူလွင်ဆောင်းဦးလှိုင်Cobraစောညီညီကျော်ထွဋ်ုဆွေအနဂ္ဂခန့်ဖြိုးသံသာဝင်းရည်မွန်မေစပါယ်ညိုမေဆွိတင်ဇာမော်သီရိဂျေမောင်မောင်လေးလေးဝါးအေးချမ်းမေကဗျာဘွဲ့မှူးNကိုင်ရာရှင်ဖုန်းထွန်းထွန်း (Examplez)ချန်းချန်းဟဲလေးရေဗက္ကာဝင်းစိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်ချမ်းအေးဝင်းသျှီရန်ရန်ချမ်းR ဇာနည်မျိုးကြီးချစ်ကောင်းနိင်ဇော်မီးမီးခဲထူးအယ်လင်းCategories A Thin Cho Swe (2) April Kyaw Kyaw (1) April Saw (2) Avril Pontpont (1) Aye Myat Thi Han (2) Aye Myat Thu (9) Aye Wut Yee Thoung (2) Bambino (1) Body Painting (3) Car Show (4) Celebirty's With Tattoos (1) celebirtys' sexy (2) Celebirtys' Snap Shot (24) Celebrity Gossip (1) Celebrity With Bikini (18) Celebrity's Sex Talk (1) Celebritys' Face Book Accounts (1) Celebritys' Hottie (15) Celebritys' Phone Number (1) Celebritys' Sex Tape (6) Celebritys' Tatto (4) Chan Chan (1) Chan Me Me Ko (2) Chit Snow Oo (1) Chit Thel Hnyar (1) Chit Thu Wai (3) Chrissie Wunna (10) Christina (3) Comic (1) Couple (18) Cute (1) Dar Li Linn (2) Ei Phyo Cherry (1) Eindrakyawzin (4) Emily Nandar (1) Gandawin (2) Gossip (3) Hayman Aung Aung (2) Hazel Moe (1) Hnin Htut Swe (1) Hnin Pwint Akare (1) Hnin Wut Yee Thoung (1) Hottie (121) Htet Htet Wint (2) Htet Moe Myat Oo (1) Htet Moe Myint (1) jean (1) Jenny (3) Juu Juu K (4) Khay Me Ko (1) Khin Layy Nwe (1) Khin Myint Zu Hlaing (1) Khin Phome (1) Khine Zaw Thway (1) Khun Sint Naychi (1) L Sai Ze (1) Love Story (4) Marina (1) Maw Phuu Maung (4) May Htut Khaung (1) May Kabyar (1) May Nan Khaung (1) Melody (4) Mi Chi Ko (2) Model (9) Moe Hay Ko (9) Moe Thandar Htet (1) Moe Yu San (5) Moeimagebam.com Hayman Khin (1) Moh Moh Pyae Sone Linn (1) Mone M Thompson (1) Music Show (1) Myanmar Beer (1) Myanmar Classic (5) Myanmar Flim Academy Awards 2009 (2) Myanmar Models (3) Myat Noe Eain (1) Myo Kyawt Myaing (1) Nadi Htut Swe (2) Nadi Wint Naing (5) Nan Khin (1) Nan Su Kay Swan (1) Nan Su's Birthday (4) Nandar Hlaing (2) Nawrat (2) Nay Chi Linn Lei (1) Nay Toe (1) Nge Nge (1) Ni Ni Khin Zaw (1) Nilar Aung Aung (1) Nobel Kyaw Kyaw (1) Notice for can't enter my blog (1) Nude (214) Nwe Nwe Tun (2) Pa Pa Win Khin (1) Pearl Win (5) Photo (626) Phuu Sone (1) Phway Phawy (4) Phway Phway (2) Phyo Thiri Khit (1) Pussy (31) Pwint Nadi Maung (2) Romatic Wedding Fair 2010 (1) Sammie Minaj (1) Sandy Myint Lwin (7) Sexy (1) Sexy Dance (1) Sexy Desktop Wallpaper (1) Shwe Zin (2) Snap Shot (1) Soe Myat Nandar (1) Soe Myat Thu Zar (1) Spy Cam (1) Su Shone Lei (4) Thandar Hlaing (1) Thazin (4) Thinngyan (6) Thinngyan 2011 (2) Thinzar Su Wai (1) Thinzar Wint Kyaw (4) Thiri Shinn Thant (5) Thonedray Oo (1) Tint Tint Tun (3) Video (102) Video Chat (48) Warning For Girls (1) Warso Moe Oo (1) Win Htut Taryar (1) Wine Su Khine Thein (7) World Cup 2010 (1) Wut Mhone Shwe Yee (11) Yadanar Khin (1) Yadanar Mai (1) Yamin Thiri Zaw (1) Yaminn Ko Ko (1) Ye' Lay (1) Ye` Deight (1) Zin Zin Zaw Myint (1) myaperit myape NLD ကို အာဏာမလွဲခဲ့တာ စစ်ခုံရုံးတွေပြောဆိုမှုကြောင့်​ဟုဆို ဒါဖြင့် ခင်များ တို့ မီလီယံနာတွေဖြစ်အောင် ဘာဖြစ်လို့ ဆက်လုပ်ခဲ့ ကြတာလဲ ဗျ? 15 minutes ago Favorite Reply Delete Remove PostMyape Rit NLD ကို အာဏာမလွဲခဲ့တာ စစ်ခုံရုံးတွေပြောဆိုမှုကြောင့်​ဟုဆို-ရယ်စရာ ပဲဗျ-ဒါဖြင့် ခင်များ တို့ အဖွဲ့တွေ မီလီယံနာတွေဖြစ်အောင် ဘာဖြစ်လို့ ဆက်လုပ်ခဲ့ ကြတာလဲ ဗျ?10 hours ago · LikeUnlike · myaperit myape ချင်းတွင်းဂျာနယ်မိတ်ဆွေများ-ပြန်ရောက်ပါပြီခင်များ-5minutes ago Favorite Reply Deleteံငြိမ်ခံ at Wednesday, June 29, 2011 မြန်မာပြည်သည် ........... တို့ပြည် အစိုးရသည် ........ စစ်တပ် အာဏာသည် .......... သေနတ် တော်လှန်လျှင် .......... ကျည်ဆံ အာခံလျှင် ........... ထောင်ဒဏ် ဝေဖန်လျှင် ............ ပြည်နှင်ဒဏ် အသက်ရှုချင်သေးလျှင် .......... ငြိမ်ခံ Forward mail က ရတဲ့ စာတိုလေး တပိုဒ်ပါ။ ရေးသူနာမည် မဖော်ပြပေးနိုင်တာကို တောင်းပန်ပါတယ်။ဧရာဝတီ ကနေ ထပ်ဆင့်ကုးယူ ဖေါ်ပြအပ်ပါသည်။ မြ ဖေ Myape Rit hit counter စာပေ၀ါသနာရှင်တွေအတွက် var counters99_width = 150;var counters99_height = 175;var counters99_vars="id=735738_2&ln=en"; <a href="http://www.superonlinecasino.com/casino-reviews/rushmore-casino">Rushmorecasino</a> <a href="http://www.fxbeing.com/">fx</a> <a href="http://www.casinoschule.com/noblecasino.html">Noble casino</a> <a href="http://www.99counters.com/">online counter</a> <a href="http://www.onlinecasinoextra.com/">ONLINE CASINO</a> သတင်း RSS Feed ဓာတ်ပုံ Nobel Women's Initiative လွတ်လပ်တဲ့ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့် ရှိဖို့ ဒေါ်စု ပြော လူ့အခွင့်အရေး တိုးတက် ကောင်းမွန်လာဖို့ ဆိုရင် လွတ်လပ်တဲ့ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောလိုက်ပါတယ်။ သတင်းအပြည့်အစုံ | နားဆင်ရန် စိန်ခေါ်မှုတွေကို ရင်ဆိုင်ဖို့ ... “အခုဒီဥပဒေတွေဟာ NLD အတွက် ကြီး မားတဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေ အများကြီးပါနေပါ တယ်။ ဒီလို စိန်ခေါ်မှုတွေကို ကျမအနေနဲ့ စိတ်မပျက်ပါဘူး။ ဒီလို ကြီးမားတဲ့ စိန်ခေါ်မှု တွေကို ရင်ဆိုင်ဖို့ အင်အားတရပ်ကိုတောင် မှ ပြန်လည်မွေးမြူရာရောက်ပါတယ်။ ပြည် သူလူထုကလည်း အဲသလို သဘောထားပြီး ဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကို ရင်ဆိုင်ဖို့ အထူးသဖြင့် အဖွဲ့ချုပ်ဒီမိုကရေစီလိုလားသူများနဲ့ တသား တည်း ရင်ဆိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်” (ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် - ဦးဉာဏ်ဝင်းမှ တဆင့် ပြည်သူသို့ ပြောကြားခ